Ukusila & Ukusika iiVili
Claw Hammers usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Ikhabhayithi yokuKhanya ngokuKhanya
U-Yang Quanlu wamenywa ukuba azimase iqonga le “tanki entsha yokucinga + nepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ukukhuthaza umgangatho ophezulu wophuhliso lweshishini” kwaye wenza intetho
ngomphathi ku 20-04-10
Ngomhla kaJanuwari 3, 2020, u-Yang Quanlu, usihlalo we-quangong Tools Co., Ltd., wamenywa ukuba athathe inxaxheba kwiforum ye "tanki yokucinga entsha + yepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ukukhuthaza umgangatho ophezulu wophuhliso lweshishini" ebibanjelwe eBeijing. Umbuki zindwendwe ngu-Tao liming, umhleli oyintloko o ...
2020, masiqhubeke nokulandela amaphupha ethu, singaze siphulukane nexesha lethu!
ngomphathi ku 20-04-09
Kwiintsuku zamva nje, inovela ye-coronavirus pneumonia ichaphazele iintliziyo zesizwe siphela. Ngexesha elibalulekileyo lokulwa ubhubhane, wonke umsebenzi uphendule ngenkuthalo kubizo lukarhulumente, kwaye phantsi kobunkokheli beenkampani, zithathe amanyathelo kwaye zaphuma ...
Ileta yendumiso eya kuGuo ixesha elide, iSebe lezoKhuseleko kunye nokusingqongileyo
ngomphathi ku 20-04-07
Ngexesha elibalulekileyo lenyumoniya ebangelwe luhlobo lwe-coronavirus, inkampani yethu iphendule ngenkuthalo kubizo lukarhulumente, yanciphisa ngokupheleleyo ukusasazeka kwesifo, kwaye yaqinisekisa ukuba ubhubhane wokulwa nomsebenzi wobhubhane ufezekisile uloyiso olukhulu. Ubhubhane wemo ...
Masimanyane silwe “ubhubhane”
Ngenoveli entsha yokuthintela ubhubhane inyumoniya kunye nomsebenzi wolawulo wangena kwinqanaba elibalulekileyo, wonke umsebenzi uhlawula kakhulu kuthintelo lobhubhane kunye nomsebenzi wolawulo. U-Yang Zhanfei, umphathi jikelele wenkampani, uququzelele iintlanganiso ezininzi kwi-Intanethi ukulungiselela ukuthunyelwa ...
Enkosi intlanganiso ebanjwe ngempumelelo
NgoJanuwari 18, iholo yaseNanhe Hotel yayihonjiswe ngezibane, kwaye ngaphezulu kwe-100 labasebenzi, kubandakanya nobunkokheli bonke, abanye abathengisi kunye neemodeli ezigqwesileyo, bahlanganisana kwiholo evuyayo. Ukunconywa kokuphela konyaka kwe-2019 kunye nokuhlwa koxabiso lwabasebenzi kwabekwa apha. Ngo-17: 00 ntambama, i-pa ...
Izixhobo zeQuangong Co., Ltd. zithatha inxaxheba kwiChina yokuThengisa nokuThumela ngaphandle
Isigaba sokuqala se-China yokuThumela ngaphakathi kunye nokuThumela ngaphandle (i-Canton Fair) kwi-2019 yeza ngexesha. Amawakawaka amakhulu ezorhwebo kunye neempawu ezaziwayo kwizixhobo zehardware, oomatshini, izixhobo zezithuthi, izinto zokwakha kunye nemizi-mveliso yokukhanyisa ehlanganisene apha. Izixhobo zeQuangong Co., Ltd ikummandla C wehardware ...
Quangong Izixhobo Co., Ltd. inxaxheba Shanghai Cologne International Hardware Exhibition
Ukwenzela ukukhuthaza uphuhliso olukhawulezayo lweshishini, inkampani ithathe inxaxheba kwi-2019 Shanghai Cologne International Hardware Exhibition ukusuka nge-10 ukuya kwi-12 ka-Okthobha, kunye nabathengi abatsha nabadala abangaphezulu kwama-30 kunye nengeniso engaphezu kwezigidi ezi-5 ze-yuan. Ukususela nge-10 ka-Okthobha ukuya kwi-1 ka-Okthobha ...
Hebei quangong Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd.